ဦးအောင်သောင်းနဲ့ အင်တာဗျူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဦးအောင်သောင်းနဲ့ အင်တာဗျူး
Posted by Zaw Wonna on Mar 18, 2012 in Copy/Paste, Other - Non Channelized | 12 comments
ဒါက လူထုတွေ တအားထောက်ခံတယ်။ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက လုပ်လိုလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အခုလည်းပဲ ဟိုက ဒီက ခေါ်ထားရင်ရပါတယ်။ မြို့ခံတွေ ဘယ်လောက် ပေါတယ်။ နယ်ခံတွေ ဘယ်လောက်ပေါတယ်ပေါ့။ အဲ့လိုနဲ့ သူကို မဲပေးမယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
လုပ်ပေးတာမကောင်းဘူးလို့ပြောလာတာတွေက ဒီနိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်လည်း နားမလည်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီအဆင့်မမီဘူး။ ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတယ်။ နောက်ပြီတော့မှ တရားဥပဒေ
စိုးမိုးရေးလိုလားတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ် နေရာတိုင်မှာပြောတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့မှာ သူတို့သွားတာ လာတာတွေ အားလုံးက တကယ်လက်တွေ့မှာ တရားဥပဒေကို တကယ်လိုက်နာလား။ မလိုက်နာဘူးလားဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ရင်သိတယ်။
Maung Maung’s Photos
ဖြေပုံကိုက ပညာတတ်မဆန်… အောက်တန်းကျ ပြိုင်ဘက်ကိုမလေးစားတဲ.လေသံ… မေးတာလေးကတစ်ခု…ပြောသွား တာကတပုံကြီး….
မြန်မာပြည်ရဲ.စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းအကျဆုံးယောက်ျားများကိုပြ ပါဆိုရင် အဲ.ဒီ ဗိုလ်ချုပ်တစ်သိုက်ပဲရှိတယ်
ချဉ်ပါတယ်အေ ( ကိုဂီ.လေသံဖြင့်ဖတ်ရန် … ဂိ… ဂိ … ဂိ…. )
ဒါဘဲလား ။ တစ်ခြားမပါတော့ဘူးလား …
ဝါးးးးးးး ဘာများလဲလို့ ခွေးဟောင်တိုင်းထကြည့်ရင် အိပ်ရေးပျက်တယ်၊ပြန်အိပ်တာပဲကောင်းပါတယ်
သူတို့ သွားပြီးမဲဆွယ်တော့ကော ဘယ်သူတွေက အုံးအုံး ကြွက်ကြွက် ဆိုကြိုလို့လဲ…။ သူတို့ အဲဒိလိုလုပ်လို့မှမရတာ…။ အောက်ကလည်းနေသေးတယ်…။ ငါ့ ဟိုဟာ ဆိုတာကလည်း ပါးစပ်ကမချဘူး
ပြည်သူတွေကောင်းကျိုး လုပ်နေတာပါ ဆိုပြီး … “ကိုယ့်ကောင်းကျိုး” လုပ်နေသူတွေ … ရှက်တတ်ရင် ရှက်ဖို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ဒီနေ့မြန်မာပြည်တွင်း ကလူတွေဟာ …. အရင်နေ့ဟောင်း တွေက လူတွေ မဟုတ်တော့ဘူး …
ဆိုတဲ့ အသိဉာဏ် နဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ ဦးနှောက် … လိုနေပြီ ဆိုတာကို …
မြတ်ခိုင်က ဘာဖြစ်လို့ “အဘ” “အဘ”နဲ့ဖြစ်နေတာလည်း
ဟိုကြောင်ပါးကြီးကလည်းပြောပုံက“ဒါက လူထုတွေ တအားထောက်ခံတယ်။ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက လုပ်လိုလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အခုလည်းပဲ ဟိုက ဒီက ခေါ်ထားရင်ရပါတယ်။ ”..တဲ့
ပေါ်ပီ..သူတို့လုပ်နေကျ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ လူတွေရှေ့တရားဝင်ဝန်ခံတာဘဲ..
သူတို့သွားလေရာ လူထုကို ချိမ်းခြောက်ခေါ် လိမ်ခေါ်…ဒါတွေဝန်ခံသွားတာဘဲ..
အင်းခက်တော့ခက်နေပြီ။ အခုထိဘာကဘာမှန်းမသိတာလား။ လက်မခံချင်လို့မသိချင်ယောင် အတင်းဆောင် နေတာလားမသိတော့ပါဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ ဆိုရင်တော့ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သိကိုမသိသေးတာဆိုရင်တော့လူမဟုတ်လို့ပဲ။ မြတ်ခိုင်ကတော့လူမဟုတ်တာတော်တော်ကြာနေပြီ။
မစီးရတဲ့မီးရထား …ဂဲနဲ့ ထုတယ် ဆိုတဲ့ …စိတ်ဓါတ်ကလေး …
တူကျောတာ၇ဲဟုတ်ထာပဲ တူတို့က မဲထိုး(ခိုး)အုန်းမှာရေ ဘာမှတိရတေးဘူး